Marmara ဒေသကြီးမော်ကွန်း - ထို rayhab
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်နှစ်သစ်ကြိုဆိုပွဲနုဘို့စတင်ခဲ့သည်! Channel ကိုကိုရီးယားနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်လုပ်-operate-လွှဲပြောင်းမော်ဒယ်တရုတ်ကုမ္ပဏီများ! အဆိုပါကိုရီးယားနှင့်အတူဆွေးနွေးပွဲများနှင့်လုပ်ဖို့တူရကီရဲ့အသစ်အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုများအတွက်တရုတ်အကြီးစားစီမံကိန်းကို! အဘယ်သူသည်တင်ဒါရရှိသွားတဲ့? [ပို ... ]
ခရီးသွားလာနိုင်စေဖို့လုံခြုံစိတ်ချစွာ်ထမ်းဆောင်နီးကပ်မှတစျထောငျကင်မရာများနှင့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာပစ္စည်းကိရိယာများ77 / 24 နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်က Metro အစ္စတန်ဘူလ် "Center ကစောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းလုံခြုံရေး" ကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်။ ရှစ်အစည်းအဝေးများ,9ရထားလမ်းများတွင်နည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာ၏မျိုးဆက်သစ် watched ။ အစ္စတန်ဘူလ် [ပို ... ]
Sözcü ရေးသားသူဂျူဒီ Toker ဒီနေ့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာ "အရာအားလုံး Haydarpasa မြေယာအရောင်းလား?" လို့သူကမေးခွန်းကြီးပြင်း။ Haydarpasa ရထားဘူတာ Toker, အမှတ်5နှင့် Haydarpasa ရထားဘူတာ၏ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီတို့ကပေါ်လာသောပြည်အမှတ်များအတွက်အစိုးရအစီအစဉ်ကိုနီးစပ်မြို့တော်ဖျက်ဆီး [ပို ... ]
စက်ထည်ဆောက်ဘို့ဝေးလံခေါင်သီ Access ကို
စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူအဘို့အကြှနျုပျကိုဝေးလံသော access ကို; ဝေးလံခေါင်ဖျားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဝန်ဆောင်မှုအလွန်အရေးကြီးသောဖို့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြေရှင်းချက်၏ optimization ။ စက်ထုတ်လုပ်သူဘို့တစ်ခုတည်း device ကို Secome နှင့်အတူ Remote access ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်အပေါငျးတို့သဝန်ဆောင်မှုများ, စံန်ဆောင်မှုများကြီးအပြင်ဘက်ပေး [ပို ... ]
"Red Bull ကား Park ကနစ်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံရှစ်" ဟုအဆိုပါဇာတျသိမျး, အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နှင့်စက်တင်ဘာလများတွင် Reti နိုင်ကျင့်နှင့်အတူ 1 ပူးပေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်တွင်ကျင်းပလိမ့်မည်။ အဖွဲ့အစည်းများ၏ဒဏ္ဍာရီအမည်များကိုရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာစွမ်းဆောင်မှုမော်တော်ယာဉ်များနှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်၌ရှိသမျှအတွက်ကစားရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအမြန်နှုန်းပြိုင်ကားသမား, [ပို ... ]
Anadolu Isuzu ကား, ထိုပြိုင်ပွဲများတွင်ယှဉ်ပြိုင်ပါလိမ့်မယ် transanatoli
အမျိုးသမီးအပြေးပြိုင်ပွဲလေယာဉ်မှူးများဆန္ဒပြပါဝင် Anadolu Isuzu ကား Isuzu ကား D-Max ကားများအတွက်ကျင်းပလိမ့်မည်သည့်ကမ္ဘာ့အပြင်းထန်ဆုံးပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ, ဤနှစ်တွင် xnumx'uncu transanatoli ပြိုင်ပွဲ။ ပထမနှင့်တစ်ဦးတည်းသာရွေး-up, Isuzu ကား D-Max တူရကီအတွက်ထုတ်လုပ်သယ်ဆောင် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်-Konya မြန်နှုန်းမြင့်ရထားလိုင်းကိုအဆိုပါ YHT လိုင်းအချက်ပြ, အစ္စတန်ဘူလ်, လျှပ်စစ် Konya မှ Polatli အတွက်ကွဲကွာစုံတွဲထံမှတိုးချဲ့တူရကီ-အစ္စတန်ဘူလ်မြန်နှုန်းမြင့်မီးရထားလမ်းမှစတင်။ ပွင့်လင်းဖြစ်ကြပြီးတူရကီ-Konya လိုင်းမသက်ဆိုင် 2013, 604 ကီလိုမီတာတူရကီ-Eskisehir လိုင်းဖွင့်လှစ်ကြောင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်း [ပို ... ]
သတ္တုရထားလမ်း Kocaeli စိမ်းနဲ့အဖြူထဲမှာခြယ်ခဲ့သည်
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, အသက်ရှင်ခြင်းကိုဤဖွဲ့စည်းပုံအဟောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ဖို့နှစ်သိမ့်ယူလာနှင့်အမြင်ပျက်စီးနေအပိုင်းနှင့်အတူရောက်စွက်ဖက်နေသည်၏ superstructure အလုပ်တစ်ကြိမ်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, မြို့, မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၏လမ်းဆုံရရှိခဲ့မြေပေါ်နှင့်လမ်းဘေး၏ output ကိုနစ်မြုပ် [ပို ... ]
သူတို့ရဲ့ယာဉ်များ၏သက်သာခြင်းအတွက်တိုးတက်မှုအပေါ် traffic အဖြစ်လမ်းသွားလမ်းလာ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, မွို့၌အသစ်သောမြေပေါ်လူကူးတံတားများကိုလျှင်မြန်စွာအလုပ်လုပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Izmit မွေးကင်းစရပ်ကွက်အတွင်းအတွက်ÇetinEmeçမြေပေါ်ဟောင်းနှင့်လိုအပ်ချက်များဖြစ်ပါသည် [ပို ... ]
အဆိုပါထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ရှယ်ယာသူ၏ Twitter အကောင့်နဲ့ IETT "ခရီးသည်များ၏တောင်းဆိုမှုမှာ" 24 နာရီညဥ့်လိုင်း။ IETT, ညဉ့်အချိန်အကြောင်းကိုတရားဝင်တွစ်တာအကောင့်ကနေကြေငြာချက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါကြေညာချက်တွင် '' ကြောင်းသေချာစေရန်ခရီးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှုများ၏မေတ္တာရပ်ခံချက် 24 နာရီ [ပို ... ]
Istanbullites, IETT နှင့်မီထရို 24 နာရီလုပ်ငန်းခွင်စေချင်
အလုပ်လုပ်İETT 24 နာရီ, သူဘတ်စ်ကားလိုင်းနှင့်လေယာဉ်ကွင်းလိုင်းများ၏နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း shared ဟုတုံ့ပြန်မှုများ၏အများစုမှာစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အချိန်များတွင်ညဉ့်အခါထံမှညဥ့်တစ်မြို့တွင်နေထိုင်သော်လည်းမီဂါမြို့အစ္စတန်ဘူလ်, အနည်းငယ်သာသို့မဟုတ်လုံးဝမအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဆောက်အဦ။ [ပို ... ]
Expree ကျွန်း Haydarpasa ဘူတာ Kavusan လိမ့်မည်သည့်အခါအပေါ်
ဤအတောအတွင်းကျွန်းပြီးနောက်အကြောင်းကို7နှစ်ပေါင်းတစ်နည်းနည်းနဲ့ကနောက်ဆုံးမှတ်တိုင်Haydarpaşaရောက်ရန်ပျက်ကွက်, မေလအတွက်နောက်တဖန်လာမယ့်အချိန်ကိုလေ့ကျင့်ပေးဖို့စတင်ခဲ့သည်။ Haydarpasa ရထား၏ကျွန်းသို့ရောက်ရှိ, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်3လကြာဆက်လက်တံ့သော Haydarpasa ရထားဘူတာမှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်၏တောင်မှ-bits [ပို ... ]
တူရကီ, ကမ္ဘာ့ Lighting ထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်သည့်ပစ်မှတ် Moving ခံရရန်
AGID - အလင်းပေးခြင်းပစ္စည်းများဒါရိုက်တာကသမ္မတ Fahr မိုဃ်းကောင်းကင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဘုတ်အဖွဲ့, ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 10 113 ရာခိုင်နှုန်းခန့်အားဖြင့်အလင်းရောင်စက်မှုလုပ်ငန်းကြောင်းပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတိုး၏ထုတ်လုပ်မှုကဆိုသည်။ လျှပ်စစ်အလင်းရောင်ပစ္စည်းကိရိယာများ, ပို့ကုန်နှင့်သွင်းကုန်များ၏နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးချိန်ခွင်လျှာအတွက်တိုးတက်မှုတွေပေါ်မူတည် [ပို ... ]
Lighting ဒီဇိုင်း၏ဖှယျစီမံကိန်း, istanbullight3။ အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးစကားပြောမှ
စက်တင်ဘာလထဲမှာıstanbullightတရားမျှတတဲ့kapsamındadüzenlenတံ့သောရှေးခေတ်ကကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးလမ်းအလင်းရောင်ရှိပါတယ်ငါတို့တိုင်းပြည်, 20-213အတွက်အန္တိအုတ်မြို့သို့။ အလင်းရောင်ဒီဇိုင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးဟာကမ္ဘာကျော်အလင်းရောင်ဒီဇိုင်နာများမှာအိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာ shared ခံရဖို့ဖှယျတှေ့အကွုံမြားအကြောင်းကိုအလင်းရောင်ဒီဇိုင်းစီမံကိန်းကို။ သေးငယ်သော [ပို ... ]
Bursa ကုန်သည်ကြီးများနှင့်တူရကီထိုင်းသံအမတ်ကြီးတူရကီနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအကြား Ekarohit လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက် (STA) မှ Iamsudh မှစီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်း Phantiph ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းသွားရောက်ခဲ့ပြီးသဘောတူညီချက် 2020 တစ်နှစ်ရဲ့အစမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးမှုများသူတို့အင်အားသုံးသို့လာရန်စီစဉ်ထားကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ BCCI, ထိုင်း [ပို ... ]
အဆိုပါ BCCI စီမံကိန်းနှင့်အတူတူရကီဂြာမနျဆကျဆံရေးက Big အလှူငှပေးဘဝမှကယျတငျ
အဆိုပါဒါရိုက်တာများဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ညီလာခံ၏ဗျူရိုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း (BCCI) ဥက္ကဋ္ဌအီဗရာဟင် Burkay BCCI, အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ဂျာမန်ကောင်စစ်ဝန်ရုံးအထွေထွေသွားရောက်ခဲ့သည်။ ဂျာမဏီရဲ့ကောင်စစ်ဝန်အထွေထွေမိုက်ကယ် Reiffenstuel အထူးဖိတ်ကြားချက်နှင့်အတူကောင်စစ်ဝန်ရုံးအထွေထွေအဆောက်အအုံမှာကျင်းပ [ပို ... ]
ဝန်ကြီးဌာန 200 Ballıkayalarသဘာဝတရားပန်းခြံထဲကနေသန်း-တစ်နှစ်တာအဝေးပြေးကျော်ပြီ
Ballıkayalarမြောက်အမေရိက Marmara ကားလမ်းကနေ ASD ကွန်နက်ရှင်နဲ့ဆက်စပ်ပါလိမ့်မည်သည့် Kocaeli ၏ Gebze ခရိုင်အတွင်းရှိ 200 သန်းနှစ်ရှိပြီသဘာဝပန်းခြံ, လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့်သစ်တောရေးရာဝန်ကြီးဌာနထံမှထူးခြားတဲ့ရှင်းပြချက်ရောက်လာတယ်။ ဝန်ကြီးဌာန 37 746 သစ်တော access ကိုလမ်းတထောင်စတုရန်းမီတာ [ပို ... ]
Sakarya တံတားကို Maintenance လုပ်ငန်းသမိုင်း Continues
ကပယ် left ဘယ်မှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်အတွက်သမိုင်းဝင် Sakarya Sakarya မြစ်တံတားပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးနေဆဲဖြစ်သည်။ Kocaeli ယဉ်ကျေးမှုထိန်းသိမ်းရေးခရိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု၏အခြေခံပေါ်မှာထားကြပါတယ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုယူသွားတတ်၏။ ဤအခြေအနေတွင်တံတားတစ်ဦးသစ္စာအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်လေ့လာရေး [ပို ... ]
BüyükyalSamandıraမိနစ်လူငယ်များသို့ 10 ကျလိမ့်မည်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, Maltepe Başıbüyük-Samandıraအကြားအသွားအလာသိသိသာသာလမ်းဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းမှစိတ်သက်သာရာရနေဆဲဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုမှာတော့ Arch လမ်းရှိပြီးသားလမ်း 20 ကာလ၏ရေထဲမှာအသက်အဘို့အအသွားအလာပိတ်ထားပါလိမ့်မည်။ IMM-Samandıraအားဖြင့်Başıbüyükဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဆောက်လုပ်ရေး [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် '' ဖက်ရှင် Streetcar '၌သမိုင်းသင်္ဘော
အစ္စတန်ဘူလ်ခရီးစဉ် '' ဖက်ရှင် Named A Streetcar '၌သမိုင်း။ အစ္စတန်ဘူလ်, သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးအခြေချနေထိုင်မှုချဲ့ထွင်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့လျှင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များမှတစ်နေ့လျှင်သို့လှည့်ကျတဲ့မြို့။ Taht-ငါမြင်း-ရေးဆွဲပေါ်လာတာဟာအရင်ကနေရထား, ကားများယနေ့မြေအောက်ရထား, ဘတ်စ်ကား, ကျော minibuses ဖို့ခြိနျးတှေ့တစ်ခုမြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးရန်, နွေဦးမှသူတို့အ reverse [ပို ... ]
Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် 2019 ရဲ့နေ့အတွက်စံချိန်ချိုးဖဲ့
မနက်စောစော Al-Adha အကြို 2019 နှစ်ပေါင်းနေ့၌ Sabiha Gökçenအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်၏စံချိန်ကျိုးခဲ့သညျ။ စနေနေ့ရက်နေ့၌ပွဲကိုခံရမည်မတိုင်မီနေ့, သြဂုတ်လ 10 119 73 တထောင်ခရီးသည် Sabiha Gokcen လေဆိပ် 2019 နှစ်များတွင်၎င်း၏အမြင့်ဆုံးနေ့စဉ်ခရီးသည်ကိန်းဂဏန်းများရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်သုံးပါ။ [ပို ... ]
Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်နေ့ကြိုဆို 42 လာရောက်လည်ပတ်သူများထောင်ပေါင်းများစွာ၏
affiliates ထံမှ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဟာမနက်စောစော Al-Adha အစီအမံတစ်ခုကိုလက်ခံရရှိကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်မတိုင်မီကြုံတွေ့နိုင်သည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆန့်ကျင်, Inc ulaşımpark။ Kocaeli အဝေးပြေးကား Terminal နှင့်, ထိုulaşımparkလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကုမ္ပဏီ, ယူဆောင်ရွက်မှုများ၏ရလဒ်အဖြစ်မည်သည့်ပြဿနာမျှမရှိဘဲမနက်စောစောအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ terminal ကို [ပို ... ]
Adapazari Wagon ရထားအချိန်ဇယားများနှင့်အရေအတွက်တိုးမြှင့်ရ
အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကြိမ်ပုနျကမှဖြင့်ခေတ္တနှင့်ရမှတ်လူများ၏အရေအတွက်ကိုဆောင်ခဲ့လေ၏။ အခမဲ့ Kocaeli ကောင်းကင်ငယ်ရွယ်စာဖတ်သူများဖြစ်ပါသည်, သူကတိုးတက်မူလျှင်မေး Adapazari တက္ကသိုလ်များဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိဘဲကုန်တင်ရထား၏နံပါတ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အနီးကပ် okuru ရထားအောက်ပါနေကြတယ် [ပို ... ]
ပျံပင်လယ် IMM န်ထမ်းမီနီဘတ်စ်သည်သူ၏ဘဝသည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်သူတို့အား
Sarıyerပျံသန်းပင်လယ်၌ပိတ်မိမီနီဘတ်စ်ငါးမျှားတဲ့သူ2လူတွေကသပိတ်မှောက်ပြီးနောက်, IBB န်ထမ်းတစ်ဦးရှည်လျားသောရုန်းကန်၏ရလဒ်အဖြစ်သိမ်းဆည်း။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM), ISPARK ၏လက်အောက်ခံ - İSTMARန်ထမ်းများဖြစ်သော Nur Muhammad ပရင်တာ, Kerem ပြက္ခဒိန်နှင့် Sefa Arbil, [ပို ... ]
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, Izmit လမ်းရှိ Salim Dervişoğlu3။ ဇာတ်စင်အားလုံးမြန်နှုန်းနှင့်အတူ၎င်း၏အလုပ်ကိုဆက်လက်။ : D - 100 အဆိုပါ dual-လမ်းသွားအဝေးပြေးလမ်းမတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်အစေခံမည်ခေတ်မီလမ်းလမ်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်, အပိုင်းနှစ်ပိုင်းအတွင်းစုစုပေါင်း [ပို ... ]